Realme Watch S: qaabeynta, astaamaha iyo qiimaha rasmiga ah | Androidsis
Realme Watch S hadda waa rasmi, oo leh aluminium jir iyo qiimo jabis
Dhamaadkii bishii hore ee odayga, soo saaraha Realme ayaa naga yaabiyey isagoo soo bandhigaya smartwatch-keedii ugu horeeyey, the Realme daawo. Hadda, dhowr bilood ka dib soo bandhigiddeeda rasmiga ah, shirkadda Aasiya ayaa hadda soo bandhigtay smartwatch cusub Realme Watch S, Nooc fitamiin badan leh oo ilaaliya qiime aad u dhexdhexaad ah.
Qalabkani wuxuu ku yimaadaa dhammaan noocyada astaamaha, oo ay ku jiraan qalabka ogsijiinta dhiigga, si aad ugu degto qiimo aan gaarin 80 euro sicirka sarrifka.
Dheh in soo bandhigida Realme Watch S Waxaa laga fuliyay Baakistaan, waa suuq kale oo kor u kacaya oo kuwa soo saarayaasha Aasiya aad ugu adag sharadkooda. Aan aragno astaamaha ugu muhiimsan ee smartwatch-kan jaban.
Naqshadeynta iyo astaamaha Realme Watch S
Heerka bilicsanaanta, waxaan ka helnaa badeecad ku faaneysa kiis 47 mm ah oo laga sameeyay aluminium, iyo sidoo kale 12 mm silikoon ah. Muuji shaashadeeda, oo ay sameysay guddi wareeg ah oo 1.3-inch ah oo leh 360 x 360 pixels, taas oo naga tagaysa qiyaastii 277 pixels halkii inji oo cufnaan ah. Intaa waxaa dheer, in kasta oo aysan tilmaamin jiilka, waxay la imaan doontaa a Lakabka ilaalinta ee Corning Gorilla Glass.
Ku sii wadida waxtarka shaashadda realme Watch S, waxay leedahay dareemayaal si toos ah u jaangooya nuurka, marka lagu daro 12 qaybood oo horay loo sii rakibay si aan u dooran karno midka aan aadka u jecel nahay. Oo iska jir, soo-saaruhu wuxuu dammaanad ka qaaday in goor dhow ay jiri doonaan in ka badan 100 qaybood oo laga kala xusho.
Marka laga hadlayo dareemayaasha uu smartwatch-kan jaban ku soo daro, dheh sidaas Realme Watch S waxay leedahay garaaca wadnaha, hurdo, kormeerka dhaqdhaqaaqa jirka (waxay la timid 16 noocyo isboorti oo kala duwan), iyo sidoo kale aaladda 'SpO2 sensor' si loo cabiro cabirka oksijiinta dhiigga. Marka la eego qiimaha iyo taariikhda la bilaabayo, dharkan xidhan ee u adkaysta boodhka iyo biyaha, marka lagu daro ismaamul ilaa 15 maalmood ah wuxuu yeelan doonaa qiimo dhan 14.999 rupees, oo ku saabsan 79 euro in la beddelo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Realme Watch S hadda waa rasmi, oo leh aluminium jir iyo qiimo jabis
Honor Band 6 waa smartwatch cusub oo ilaa 14 maalmood ismaamul ah